Tag: mahara | Martech Zone
Chipiri, Kurume 17, 2015 Chipiri, Kurume 17, 2015 Douglas Karr
Isu tanga tichiita hurukuro yakanaka nezve yangu irikuuya mharidzo paSocial Media Kushambadzira Nyika nezverudzii rwekupihwa kwatingaite kune vanhu vakapinda musangano wangu kana chiitiko chese zvacho. Iyo hurukuro yakauya neyekuti kana kwete chero dhisikaundi kana yemahara sarudzo inogona kudzikisira basa ratinozopa. Chimwe chezvidzidzo zvandakadzidza ndechekuti kana mutengo wangoiswa, kukosha kwacho kunoiswa. Izvo hazviwanzo
Chishanu, May 16, 2014 Svondo, May 25, 2014 Douglas Karr
Munguva pfupi yapfuura, ndakabvunzurudzwa uye ndikabvunzwa kuti makambani anogadzira zvisirizvo anoita kana achigadzira nekushandisa zano ravo rezvemagariro. Chiitiko changu chingangopesana nevazhinji vevashandi kunze uko, asi - mukutendeseka kwese - ndinofunga kuti indasitiri ino yakura uye mhedzisiro inozvitaurira. Zvemagariro Midhijisoni # 1: Yemagariro Midhiya ndeyeKushambadzira Chiteshi Makambani anowanzo tarisa pasocial media kunyanya senzira yekushambadzira. Zvemagariro midhiya kutaurirana